Ogaden News Agency (ONA) – Abraham Wolde oo qorshahe u dajiyay Cabdi iley loona akhrin doono odayaasha
Abraham Wolde oo qorshahe u dajiyay Cabdi iley loona akhrin doono odayaasha
Wararka naga soo gaadhaya guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Jigjiga waxay muujinayaan inuu shacabka fahmay sababaha ay u fashilmeen shirkii ka socday Nairobi iyo canaasirtii ka dambaysay fashilintiisa. Waxayna dadweynaha si aad ah u soo dhaweeyeen mawqifka uu qaatay ururka ka dib markay ogaadeen in jenenka lagu laalusho dhiigooda ee fadhiya Harar uu si ulakac ah u burbuuriyey shirka isagoo ku ilaashanaya danaha iyo laaluushka xad-dhaafka ah ay ka helaan Cabdi iley isaga iyo ninka walaalaha ay yihiin jananka ee lagu wareegay guud ahaan qandaraasyadii gobolka iyo tijaaradii gobolka.
Dhaq-dhaqaaq iyo isdaba orod badan ayaa ka socda Jigjiga oo u dhexeeya Cabdi iley iyo kooxdiisa oo kaashanaya kana jenenka qaybta Harar Abraham Wolde iyo kooxda ka soo horjeeda oo doonaya inay qarka ka tuuraan Cabdi iley oo iyagana haysta taageero kala duwan. Waxaa isagana la socda Cabdi iley iyo jeneraal Wolde oo abaabulka wax kaga jira Ibraahim dheere oo loo ballan qaaday in boodhka laga jafi doono haddii ay guulaystaan Cabdi iley iyo kooxdiisa.
Laba arimood ayay hadda dadweynaha aad u fahmeen. 1- In cabdi iley iyo Jenenka fadhiya Harar aanay doonaynin inay nabadgalyo ka dhacdo Ogadenya iyagoo u arka inay sidaa ku lumayso danahooda gaarka ah oo haddii ay Itobiya iyo ONLF ku heshiiyaan in xal siyaasi ah loo helo qadiyadda Ogadenya ay meesha ka baxayaan. 2- Waxay kaloo dadweynaha fahmeen mawqifka ONLF ee ku aadan qadiyadda Ogadenya in aanay ahayn maslaxad gaar ah oy doonayaan hadafka ay doonayaana uu ka duwan yahay ujeedooyinkii ay wateen kooxihii isu soo dhiibay gumaysiga.
Waxaa la filayay maanta ilaa berri inuu ka furmo Jigjiga shir loo qabanayo odayaal laga soo ururiyay degmooyinka oo la doonayo in la adeegsado dacaayadihii raqiiska ahaa oo la tuso dawladda dhexe ee fadhida Adisababa. Odayadaa ayaa la doonayaa in laga daawado TV-yada iyagoo ku qaylinaya hanoolaado Cabdi iley. Sida ay qoreen shabakadaha aadka ula socda arimaha ka socda siyaasadaha Itobiya iyo dhaq-dhaqaaqa ka socda Jigjiga ayaa qoray inuu shirka odayaasha loogu yeedhay uu qorsheeyay jeneraal Abraha Wolde oo doonaya inuu ka dhaadhiciyo dawladda dhexe inay dadweynaha iyo maamulka kililkaba rabaan in loo daayo Cabdi iley xukunka. Warqadda uu soo diyaariyay Abraha Wolde oo laga akhrin doono shirka ayaa ka hadlaysa wuxuu ku tilmaamay Jenenka waxqabadka Cabdi Ilay, gaar ahaan 2dii sano ee uu madaweynaha ahaa, isagoo aad u buun-buuninaya inuu la dagaalamay ONLF.
Sida ay qortay shabakadda faalo, Qorsheha uu soo qoray Abraha Wolde ayuu hadafkiisu yahay inuu Cabdi Ilay siiyo wakhti uu dib ugu soo noolaan karo iyadoo ESTV iyo Cakaranews-ba si balaadhan looga soo dayn doono si Cabdi ilay uu u noqdo nin shacabkiisii iyo maamulkiisiba la dhacsanyihiin wax tarkiisa.
Dacaayadahaa raqiiska waxaa aad u jeclaa oo hanti badanna ku bixin jiray KT Meles Zanawi ilaa uu sababteeda u dhintay, ka dib markuu ku ogaaday socdaalakiisii ugu dambeeyay beentii laga gadayay waa isagii loo sii qaaday isbitaalkii uu ku bakhtiyay. Borobagaandada noocaa ah ee kharashka xoogan lagu bixiyo ee waaqica dhabta ah aan waxba ka badalaynin wuxuu badiyaa un khasaaraha gumaysiga iyo kharashka kaga baxaya dagaalka uu kula jiro shacabka, taasoo ugu dambaynta keenta burburkiisa.
Wixii ka soo kordha waynu la socon doonaa.